[အခန်းဆက်] စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲက RED HOT CHILI စတိုင်ထိုင်းဟင်းလျာ ! | yathar Magazine
ဖေ‌ဖျောဝါရီ 8, 2020
မင်္ဂလာပါ ! ပြီးတော့ထိုင်းစကားလေးနဲ့ စ၀ပ်ဒီးခလပ် !
မရခဲ့ဘူးဗျာ။ နောက်ဆုံးမှာ သူကထိုင်းမှာပဲရှိခဲ့တာဆိုတာကိုပဲသိခွင့်ရခဲ့တဲ့ အရှည်ကြီး ပါ !
အဲ့လိုသွားရင်း ဒီတစ်ကြိမ် ရန်ကုန်မှာလူကြိုက်များလာတဲ့ဆိုင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျ !ကု
မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆိုင်လေးက ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။
ထိုင်းဟင်းလျားတွေကိုအဓိကရောင်းချပေးတဲ့ Thai Lannaလို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်လေးပါ !
ထိုင်းဟင်းလျာများထဲမှာမှ ပင်လယ်စာဟင်းတွေကိုအဓိကထားရောင်းချပေးပါတယ်တဲ့ဗျ ! ပင်လယ်စာကိုမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေပေးနေပါတယ် ~
ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ ထိုင်းအထောင်းတွေအတွက် ငရုတ်ဆုံကြီးက စောင့်ကြိုနေတယ် !
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် ထောင့်ကြည့်တာ ကြီးလွန်းလို့ကြောက်မိတယ်ဗျ ~ ~ ~.
ဆိုင်ထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကဆိုင်ထဲရောက်သွားတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပြင်အဆင်တွေ ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၂ထပ်မှာဆို လူအများအဖွဲ့လိုက်မိတ်ဆုံစားပွဲတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျ !
အခုကစပြီး Thai Lanna ရဲ့ဟင်းပွဲတွေအများကြီးထဲမှနံပါတ်(၁)လူကြိုက်အများဆုံးမီနူးလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ ! ဒီမှာပါခင်ဗျာ !
ဟိုး အပြင်အဆင် အရမ်းကိုလှပပြီးစားချင်စိတ်တွေတဖွားဖွား
ဒီလိုဆို အရမ်းတွေစားချင်နေပြီ ! ဘယ်လောက်ထိစားချင်နေလဲဆိုတာကို ဥပမာပြောရရင် ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဘေ့စ်ဂစ်တာပညာရှာကိုလိုက်ရှာနေတုန်းကခံစားချက်အတိုင်းပဲဗျာ ! မဆုံခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ !
ဒီဟင်းပွဲလေးက မုန့်ဖတ်ထောင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးပါတဲ့ထိုင်းအရသာပင်လယ်စာဟင်းလျာ~ ပူပူစပ်စပ်ချဉ်စပ်အနံ့ဆော့စ်အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် နဲ့မုန်ဖတ် ဒါအပြင် ခုံး၊ ဂဏန်း၊ ပုစွန်၊ ကင်းမွန်၊ ပြည်ကြီးငါး စတဲ့ပင်လယ်စာမျိုးစုံအများကြီးပါတယ် ! ဒီလိုပမာဏကို ၇၀၀၀ ကျပ်ပဲကျသင့်မှာဆိုတော့အရမ်းတွေတန်နေပြီဗျ !
ပြီးတော့ အတူတူတွဲရက်မှာလိုက်တာက ဂျပန်မှာရေခဲခွဲခြမ်းလေးတွေနဲ့အအေးလို Blue Hawai Soda ! သံပုရာအနံ့လေးလဲပါဝင်တာကြောင့်စိတ်က်ုကြည်လင်လန်းဆန်းစေတဲ့အရသာ ! သောက်လို့အရမ်းအဆင်ပြေတယ်ဗျ ! ၂၀၀၀ ကျပ် !
ကဲ မုန့်ဖတ်ထောင်းလေးစာကြည့်မယ် !
ချဉ်စပ်အရသာလေးနဲ့ ပင်လယ်စာလတ်ဆတ်တဲ့အရသာ ဆော့စ်အနှစ်အရသာရဲ့ကောင်းချက်ကပြောမပြတတ်အောင်အရမ်းကောင်း ! အစပ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေများကသဘောတွေ့လောက်တဲ့ အစပ်အဟပ် !
သေချာပင်လယ်စာတွေကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အစိမ်းစားရတာမကြိုက်သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် !
သံပုရာသီးကိုအသုံးပြုထားလို့ အချဉ်အရသာလေးနဲ့အရမ်းကိုခံတွင်းလိုက်စေမှာပါ ! လိုက်ဖက်လွန်းတယ်ဗျာ !
မုန့်ဖတ်ကိုစားလိုက်ရင်လည်း လတ်ဆတ်တဲ့ငံပြာရည်ဆော့စ်ရဲ့အနှစ်အရသာကပျော်ဝင်နေလို့ ထိုင်းစတိုင်ခံစားချက်အပြည့်ရနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထူးဆန်းတာတစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ်။
လျှာကထုံနေပြီး ဘာစားစား ဘာသောက်သောက် စပ်တော့တာပါပဲဗျာ။
အဲ့လိုခံစားနေရတာတွေတခဏအတွင်းပျောက်စေမယ့် Blue Hawai Soda.
ဒီလို မုန့်ဖတ်ထောင်းလိုဟင်းလျာရဲ့နာမည်အမှန်လေးက ပင်လယ်စာအစုံထောင်းလေးပါတဲ့နော် !
「ဒီဟင်းပွဲ စပ်တယ်နော်အဆင်ပြေရဲ့လား ? 」
「အစပ်ကြိုက်တယ်ဗျ ! လုံးဝအဆင်ပြေတယ် ! 」
သေချာစဉ်းစားလိုက်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်စပ်တယ်လို့ပြောနေတာကို ဂျပန်လူမျိုးကျွန်တော် က စပ်မှစပ် ပါးစပ်မပိတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာ။
စပ်ပြီးတော့မှစပ်လာတဲ့ခံစားမှုကို ဒီဟင်းပွဲကနေရတဲ့ ခံစားချက်အဆင့်ကတော့ ကျွန်တော့အတွက် တော့တကယ်ကိုတိုက်ပွဲတစ်ခုလိုပဲဗျာ !
အစပ်အရမ်းကြိုက်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေတောင် စပ်လိုက်တာစပ်လိုက်တာနဲ့ပြောမှာမလွဲဘူး !
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဲ့လောက်စပ်တာစားဘူးတာဗျ !
ဒါပေမယ့် စပ်စပ်လေးနဲ့ အရသာရှိတော့ တလုတ်ပြီးတလုတ် !
နောက်ဆုံး အကုန်စားနိုင်ခဲ့ပြီ ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !
ပြီးတော့ စိတ်မပူပါနဲ့ ! အစပ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတော့ အစပ်သိပ်မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်
လည်းအဆင်ပြေစေလို့ သွားရောက်စားသုံးကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျ !
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အစပ်ကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ဆိုင်လေး !
တကယ်ပဲ Thai Lanna ဆိုင်လေးမှာ များပြားလှတဲ့မီးနူးတွေရှိတဲ့အတွက်အမျိုးမျိုးသောဟင်းလျာတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် !
ထိုင်းဟင်းလျာမျိုးစုံကိုရရှိနိုင်ပါတယ် ! ထိုင်းဟင်းလျာ ဒါ့အပြင်ဟင်းစပ်စပ်လေးတွေကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေများက တစ်ကြိမ်တစ်ခေါက်တော့သွားကြည့်သင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ! ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲဗျာ !
စားသောကျဆိုငျ • အငျတာဗြူး
4 လ ago
အမည် - Tigers noppo no komuro aka (အရှည်ကြီး)
အလုပ်အကိုင် - ဟာသလူရွှင်တော်
အသက် - ၃၀ နှစ်
ဂျပန်နိုင်ငံchibaပြည်နယ်မှာမွေးဖွားပြီးအနုပညာသက်တမ်း(၁၂)နှစ်အတွင်း၂၀၁၈ခုနှစ်၁၀လပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
[အခန်းဆက်] မူလပုံစံပြန်ရောက်သွားသော ဖက်တီးဘုရင်
ကွကျဥကို ပုံမှနျအတိုငျးစားရတာ ရိုးနရေငျ ဒါမြိုးလုပျစားကွညျ့ပါ 13.1k views